Vaovao - Manolotra fijerena vaovao any amin'ny fantsakan'i Los Angeles ny fitsangatsanganana an-tanàn-dehibe an-tanàn-dehibe
Ny Urban Geophone Array dia manolotra fijerena vaovao any amin'ny fantsakan'i Los Angeles
Urban Geophone Array dia manolotra fijerena vaovao any amin'ny fantsakan'i Los Angeles
1 Aogositra 2018 –Nampiasa geofone haben'ny kafe afaka amina iray volana eo an-tokotany, kianja golf ary zaridainam-panjakana ny mpikaroka, nanangona angon-drakitra ampy hamelana azy ireo hanao sarintany ny halalin'ny sy ny endrik'ireo vilia sedimentary ao San Gabriel sy San Bernardino an'ny Los Angeles, Kalifornia.
Mihevitra ny Seismologists fa ireo basse sedimentary ireo dia mety hihetsika "mpiambina onja" hifantoka sy hamandrihana angovo avy amin'ny horohoron-tany any amin'ny faritra atsimo San Andreas Fault, noho izany ny fahatakarana ny rafitr'izy ireo dia zava-dehibe mba hanampiana amin'ny faminavina ny fahaizan'izy ireo mampita ny angovo avy amin'ny horohoron-tany toy izany ho any afovoan-tanànan'i Los Angeles .
Ny ekipa mpikaroka, notarihin'i Patricia Persaud avy ao amin'ny Louisiana State University sy Robert Clayton avy amin'ny California Institute of Technology, dia afaka nanao sarintany tamin'ny antsipiriany bebe kokoa ireo lovia roa ireo noho ny fandinihana teo aloha, araka ny tatitry ny Seismological Research Letters. Nasehon'izy ireo fa ny basin'i San Gabriel dia lalina kokoa noho ny tavy San Bernardino ary ny tavy San Bernardino dia manana endrika tsy ara-dalàna. Persaud sy ny mpiara-miasa aminy koa dia nahitana fambara offset lalina tamin'ny sosona ny hoditry ny tany izay mety misy ifandraisany amin'ny lesoka roa — ny lesoka Red Hill sy Raymond — izay efa natao an-tsarintany tamin'ny faritra teo akaiky teo.
Patricia Persaud sy Mackenzie Wooten, mpianatra bakalorea CalTech, dia nametraka node teo an-tokotanin'ny tranon'ny Los Angeles. / Patricia Persaud
"Mbola aloha loatra ny fotoana hilazana ny fomba hanovan'ny valin-tsika ny fomba mety hieritreretantsika ireo fahafahan'ireto lovia ireto hampita ny angovo mandry," hoy i Persaud. "Na izany aza, manangona angon-drakitra misimisy kokoa ao amin'ilay faritra izahay izay hampiasaina hanadio bebe kokoa ny firafitry ny basin."
Geophones dia fitaovana manova ny hafainganam-pandehan'ny fivezivezin'ny tany ho lasa voltre izay azo ampiasaina hamaritana ny geometry ny firafitra ambanin'ny tany. Ny fakana sary an-tsaina ny antsipirian'ny firafitry ny sombin-drano sedimentary dia mitaky tobim-pahanginana goavambe marobe izay misy elanelam-potoana mba hahazoana fiovana manan-danja eo amin'ny firafitra manerana ny fantsakana. Ny arrays Geophone dia manolotra fomba tsy lafo sy mora azo hanangonana izany tahiry izany amin'ny faritra an-tanàn-dehibe be olona, ​​raha oharina amin'ny fahasarotana sy fandaniana amin'ny fanaparitahana seismometera malalaka, hoy i Persaud.
Ny tsirairay amin'ireo teboka 202 naparitaka tamin'ny fandinihana, amin'ny tsipika telo manitatra ny lovia avaratra, dia sahala amin'ny haben'ny kapoaka kafe. "Milanja enina kilao eo ho eo ny lanjany ary manana logger data, bateria ary fandraisam-peo rehetra ao anaty kaontenera iray," hoy i Persaud nanazava. "Mba hametrahana azy ireo amin'ny tany dia mihady lavaka kely isika izay hamela ireo vodin-tany hosaron-tany manodidina ny roa santimetatra raha vao nambolena mafy izy ireo. Ny ankamaroan'ny mponina ao amin'ny faritr'i Los Angeles dia miteny amintsika mba hametraka azy ireo amin'izay tiantsika, ny sasany aza manampy antsika mihady lavaka; Ka dia misafidy tranonkala iray eo amin'ny tokotanin-dry zareo izahay ary afaka dimy minitra dia efa voapetraka tsara sy voarakitra an-tsoratra ny teboka. ”
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny tompona trano dia "tena sariaka sy nampiantrano" nandritra ny fandalinana natao, hoy i Persaud. “Ny tena mahaliana dia rehefa nahazo valiny tsara dia saika teo noho eo. Ny mponin'i Los Angeles dia mahafantatra tsara ny loza mitatao amin'ny seismika eto amin'ity faritra ity, ary matetika dia liana amin'ny fandalinantsika sy ireo teboka, ary te hahalala bebe kokoa izy ireo. Ny sasany manolo-kevitra hanaparitaka ny vaovao momba ny fianarantsika amin'ny alàlan'ny media sosialy ary mandrisika ny namany sy ny mpiara-monina aminy handray anjara. ”
Nanangona tahiry tsy tapaka mandritra ny 35 andro ireo teboka. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsikaritr'izy ireo ny fivezivezena avy any amin'ny planeta 6 sy ny horohoron-tany lehibe kokoa izay nitranga kilometatra an'arivony miala an'i Los Angeles. Ny angon-drakitra momba ny onjan'ny seismika avy amin'ireo horohoron-tany teleseismika ireo dia azo ampiasaina amin'ny fomba antsoina hoe teknikan'ny asan'ny mpandray mba handrafetana ny hakitroky ny crust sy ny crustal crustal rafitra eo ambanin'ny garan'i seismic. Ny andraikitry ny mpandray kajy avy amin'ny lamina nodal dia mitovy amin'ireo nikajiana tamin'ny angon-drakitra malalaka, hoy ny fehin-kevitr'ireo mpikaroka, fa ny tandindon'ny nodal kosa dia manome fijerena avo kokoa ny firafitry ny crustal toy ny sisin-tany eo anelanelan'ny hoditry ny tany sy ny lambany ary ny fifandraisana misy eo amin'ny antsanga sy lakaly any ambany rihana manerana ny lovia.
Amin'ity fahavaratra ity, ny ekipa mpikaroka dia miverina any California mametraka node "manaraka ny tsipika vaovao izay natao hameno ny faritra rehetra mety hisy fiovana amin'ny endrika basin," hoy i Persaud. "Vao avy nametraka profil vaovao telo izahay ary avy eo dia hanangona ny valiny avy amin'ny mombamomba anay rehetra mba hamokatra maodely firafitra nohavaozina ho an'ireo lovia."
Fotoana fandefasana: Sep-02-2020